Ihe ị ga-ahụ n'obodo Eguisheim na France | Akụkọ Njem
Eguisheim bụ obodo na obodo dị na France na mpaghara Alsace a ma ama. Ọ bụ ebe a makwaara maka inwe nnukwu mmanya mmanya, mana ọ na-apụtakwa maka ịbụ otu n'ime obodo ndị ahụ n'etiti ndị kachasị mma na France n'ihi na echekwara usoro ọdịnala ya nke ọma. O doro anya na ọ bụ nleta dị mma maka ngwụsị izu.
Eguisheim bụ otu n'ime obere obodo ndị dị na Alsace nke nwere nnukwu amara, n'ihi na ụlọ ya ka nwere ụdị ọkara ọkara. Ha pụtara iche n'oge oge ekeresimesi, mana enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ n'akụkụ a nke France nke dị nso na ókèala Germany.
1 A bit nke akụkọ ihe mere eme
2 Okirikiri ọla edo
3 Ebe du Chateau Saint Leon
4 Gulọ Eguisheim
5 Chọọchị San Pedro na San Pablo
6 Eguisheim na ekeresimesi
Eguisheim amalitela akụkọ ntolite ya site na ịghọ ntọala ndị Rom. Ọbụna ndị Rom malitere ịkọ ubi vaịn n'ebe a dị ezigbo mma. Ma nke ya uto agaghị abịa ruo narị afọ nke asatọ mgbe Count Eberhardt nwere nnukwu ụlọ na mpaghara ahụ. Gburugburu ụlọ a, emepụtara okporo ámá ndị gbara ya gburugburu na ọdịdị nke mgbanaka, nke na-enye obodo a nhazi mbụ. Ọ bụ otu ụlọ ahụ ka enwere ike ịga taa, nke a ga-amụ Bruno nke Eguisheim-Dagsbourg, onye ga-abụ Pope Leo IX.
Okirikiri ọla edo
Na Eguisheim kachasị mma anyị nwere ike ime bụ ịlafu onwe anyị n'okporo ámá ochie ndị ahụ mara mma, na-eche etu ndị bi n'obodo a si bie ọtụtụ narị afọ. Anyị ga-anụ na akụkọ ziri ezi, ebe ọ bụ na n'akụkụ abụọ nke n'okporo ámá ahụ mara mma ahụkarị ọkara ọkara osisi na ụlọ na mara mma na agba. Gburugburu ọlaedo na-ezo aka na mpụga obodo, ebe okporo ámá ndị kachasị mma dị. Tgbagharị nwayọ, see foto na ịnụ ụtọ obere nkọwa nke ụlọ ndị a na-ejikarị okooko osisi chọọ, ga-abụ ihe ga-atọ anyị ụtọ. Rue du Rempart bụ otu n’ime okporo ámá ndị ahụ ma ọ na-atọ anyị ụtọ na okwute ochie ochie mara mma nke yiri ka a ga-ewepụ ya n’akụkọ. N’elu windo na ibo ụzọ ụfọdụ, ị ga-ahụ ihe ndị e dere n’ezinụlọ ochie ma ọ bụ ọrụ aka ndị a rụrụ n’ụfọdụ ụlọ ndị ahụ. N'okporo ámá a bụkwa Pigeonnier, ebe na-enye nkewa nke n'okporo ámá abụọ na nke ahụ bụ otu n'ime ebe kachasị ese foto na Eguisheim.
Ebe du Chateau Saint Leon
Ozugbo anyị gagharịa gburugburu obodo ahụ na obere okporo ámá ya na ụlọ ya ndị mara mma, anyị ga-erute n'etiti. Nke a bụ nke kachasị ukwuu na nke etiti na Eguisheim, ebe a na-agaghị ahụli anyị. N'etiti square a, anyị nwere ike ịhụ ọmarịcha isi iyi nwere ọnụ ọgụgụ nke Saint Leo IX ma n'azụ isi iyi a ka anyị ga-ahụ ụlọ ochie nke ewuru na narị afọ nke asatọ. N’akụkụ nnukwu ụlọ ahụ, e nwere obere ụlọ ụka raara nye Pope Leo, nke e wuru n’elu ụlọ mkpọrọ ochie ụfọdụ.
Ogige ndị ọzọ dị na obere obodo Eguisheim ahụ anyị kwesịrị ileta bụ Ebe du Marche, n'azụ ụlọ ụka ahụ. Ọ bụ obere oghere nwere ihe ọkpụkpụ na etiti, mana n'oge ekeresimesi ha na-etinyekwa ọmarịcha ahịa ebe a. Ebe MGR Stampf bu ebe ozo di nma na obodo a, ya na isi iyi di na etiti ya na ala okwute. Ha bụ obere ogige ma ha na-adọrọ adọrọ maka nkọwa niile, yabụ na anyị ekwesịghị ịhapụ nkuku ọ bụla nke ebe a, ebe ha niile nwere ike iju anyị anya.
A hụrụ ihe ndị fọdụrụ n’ụlọ elu ndị a ná mpụga obodo ahụ. Weckmund, Wahlenbourg na Dagsbourg Ha bụ arụ ụlọ sandstone atọ na - acha uhie uhie nke nwere ezinaụlọ Eguisheim. N’agha nke Óbolos chere ihu n’etiti ndị agbata obi ya, a gbara ndị òtù ezinụlọ a ọkụ n’elu osisi ma ụlọ elu ndị a ghọrọ akụkụ nke ndị bishọp nke Strasbourg.
Chọọchị San Pedro na San Pablo
Nke a bụ ụka kachasị mkpa nke ndị Eguisheim. Ọ bụ ụlọ nsọ ochie, nke malitere na narị afọ nke iri na atọ na nke iri na anọ, nke e wuru na Romanesque ma mana ugbu a na-enye anyị ụdị ndị Gothic. Ọ bụ ezie na mputa ya adịghị adọrọ mmasị, n'ime anyị nwere ike ịhụ ihe osise nke Virgin nke Ouvrante site na narị afọ XNUMX.
Eguisheim na ekeresimesi
Ọ bụ ezie na obodo a mara mma n’afọ niile, eziokwu bụ na n’oge ekeresimesi ọ na-anabata ọtụtụ ndị ọbịa. Obodo a tinyere ndị ọzọ dị ka Colmar nwere ụfọdụ ọmarịcha ahịa n’ámá ya na n’okporo ámá ya Ha na-eji ejiji dị iche iche achọ mma. Ọbụna a na-achọ ụlọ mma ka ihe niile wee nwee ọnọdụ ekeresimesi dị egwu. Ọ bụrụ na-amasị gị oge a n'afọ, ị ga-aga obodo ndị a n'oge ekeresimesi iji nweta mmụọ ahụ n'ụzọ zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Eguisheim, Alsace